Ngoku iyafumaneka kwiOfisi yeWPS yeLinux 2016, enye eya kwiLibreOffice | Ubunlog
UJoaquin Garcia | | software, Ubuntu
I-LibreOffice, iofisi ye-Ubuntu iya kuba nohlobo olutsha ekupheleni kwehlobo, kodwa ngelixa olu hlaziyo lukhulu lufika, nokuba siyaneliseka yinguqulelo yangoku okanye sizama ezinye iindlela ezifanelekileyo nezilungileyo ezinje ngeOfisi yeWPS yeLinux.
Le suite yeofisi ibizwa njengeyona simahla kwiifomathi zikaMicrosoft, kutshanje ukhuphe ingxelo entsha ngolunye uphuculo. Uphuculo olungaphelelanga apho kulungiso lwebug kodwa lukongeza imisebenzi emitsha kunye nephuculweyo.
IOfisi yeWPS yeLinux 2016 izisa ifayile entsha umsebenzi wokukhangela oya kusivumela ukuba sikhangele amagama okanye idatha phakathi kwamaxwebhu, Umsebenzi onomdla oya kusinceda senze amaxwebhu eefayile ezichanekileyo kunye neefayile, sinceda imveliso. Ujongano lomsebenzisi lutshintshile ngandlela ithile ukwenzela ukuba imeko-bume ivelise ngakumbi abasebenzisi.
Amakhonkco ewebhu amaxwebhu sele ekhona iya kufumaneka kumaxwebhu esiwathumela ngaphandle kwifomathi ye-pdf, Amakhonkco ebengasebenzi ngaphambili kwaye ngoku siza kuba nawo kwi-pdf ukuba sifuna njalo. Imifanekiso echaziweyo okanye izithonjana zoNikezelo lweWPS zikwenziwe zasebenza ngcono kwaye zibonelela ngokusetyenziswa okukhulu xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili.
Enye into entsha in IOfisi yeWPS yeLinux 2016 yinkxaso yeenkonzo zefu. Ngoku sinokuqhagamshela iOfisi yethu yeWPS ngeenkonzo ezinjengeOneDrive okanye iDropbox ukuhlela nokugcina amaxwebhu ngokuthe ngqo kwiinkonzo zelifu ngaphandle kokuyeka ukusebenzisa iWPS Office yeLinux.
Inguqulelo entsha yeOfisi yeWPS yeLinux 2016 ngoku iyafumaneka kwi ikhonkco elandelayo. Apho asizukufumana kuphela ipakeji yedebhu yenguqulo yokufaka ku-Ubuntu kodwa siya kufumana kwakhona ifomathi ye-rpm yokufaka kolunye usasazo kunye nefomathi yetha yokuzihlanganisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ngoku ikhona iOfisi yeWPS yeLinux 2016, enye eya kwiLibreOffice
Izimvo ezi-14, shiya ezakho
Giovanni gapp sitsho
Ndiyayisebenzisa kwaye kungcono kakhulu kunasimahla kwi-ofisi kuba le ofisi iyayihlonipha ifomathi yeOfisi yeMicrosoft njengoko ndicinga ukuba yeyona ndawo ingcono onokutshintshiselana ngayo ngeefayile ukusuka kwenye iofisi iye kwenye ngendlela ecacileyo ubona phantse ukuba akukho mahluko. iofisi yasimahla yingxaki yokuvula ifayile kwaye ubone ukuba ayihloniphi imida, ii-macros azisebenzi, iifomula nazo. Ndicebisa iwaka WPS
Phendula Giovanni Gapp
UJosué Camero sitsho
Kuyinyani kodwa kufuneka bayilungise i-spell checker, kuyacaphukisa ukuyikhuphela kwiphepha kwaye uyifake
Phendula kuJosué Camero
Ukuba kuphela kwenkcukacha onayo kwaye ngamanye amaxesha isilungisi asijongi kakuhle ukusuka apho ukuya phambili andikazukufumana nkcukacha zinkulu
UGerardo Herrera sitsho
Ndiyakhumbula ukuba yayintle kakhulu, kodwa yeza ngesiTshayina kwaye kwakunzima ukutshintsha ulwimi ... ndizakuzama kwakhona
Phendula kuGerardo Herrera
I-WPS ivela kwinkampani yaseTshayina ngenxa yeso sizathu kodwa baphucule kakhulu kwaye bathathe umtsi omkhulu
UAntonio Pérez sitsho
Ukutshintsha ulwimi ngoku kulula kakhulu kwaye ngaphandle kokukhuphela nantoni na.
Phendula u-Antonio Pérez
Ndenze nje, enkosi
Inkxaso yeLinux yayikwi-hiatus ukusukela kunyaka ophelileyo (mhlawumbi sele ishiyiwe). Kuba yahlala kuhlobo lwayo lweAlfa, nangona kucingelwa ukuba inkxaso inokuphinda iqale ...
IHexabor yaseUre sitsho
Kodwa apha bathi namhlanje akukho hlaziyo, ukuba yonke into ibubuxoki kubantu beWPS ...
Phendula kwi-Hexabor yase-Uri
Ukukhetha kakhulu, ayisiyiyo enye indlela yasimahla, yenye indlela yasimahla. Kwaye njengoko besitsho, inkxaso yabo iphelisiwe, kufanelekile ukuba okwethutyana
UPablo Nataniel Flores Garcia sitsho
Amaqela esiThathu aseJamani
Phendula Pablo Nataniel Flores Garcia
Amaqela esiThathu aseJamani sitsho
Ndiyikhuphele ekuhambeni kwam ✌️✌️
Phendula Amaqela esiThathu aseJamani
UGildardo Garcia sitsho
Kodwa ngaba iyahambelana neOfisi yeLebhu .ODT, .ODS kunye .ODP iifayile?
Phendula kuGildardo García
UCristian Lopez sitsho
Ndiyithanda kakhulu i-WPS, ndiyifumana ibalasele ngobuhle kuneLibreoffice, kodwa andikwazi ukwenza ukudityaniswa kweposi kwi-WPS, ngelixa iOfisi yeLibre inokuyenza kwaye iza ne wizard endincedayo ukuyenza.
Kwaye i-Ofisi yokuhlola ukupela kwamahhala iza kulungela.
Phendula Cristian López
Faka ingxelo yesihlanu yolondolozo lweKernel 4.11 kwi-Ubuntu 17.04